AVI Player Bilaashka ah ee Windows 8: Si fudud Play AVI Files on Windows 8 w
> Resource > Windows > Free AVI Player for Windows 8: Si fudud Play AVI Files in Windows 8
AVI, Audio Video Interleave, waa qaab weel multimedia waxaa badanaaba lagu adeegsadaa oo nolol maalmeedkeena. Si kastaba ha ahaatee, heerka riixo ma yahay universal iyo heerarka kala duwan riixo daalinayn halka ciyaaro file AVI ah. Sidaas darteed, waxaad inta badan ku dhaco waxaa laga yaabaa in dhibaato u ciyaaro files AVI qaar on Windows cusub ee lagu rakibay 8. Sida loo dhibta dhibaatada? In this article, 3 ciyaaryahan AVI free Windows 8 waxaa lagu soo bandhigay inuu kaa caawiyo inaad ciyaari files AVI on Windows 8 habsami leh.
Xalka 1: ciyaaryahanka boosaska badan AVI lacag la'aan ah Windows 8 (talinayo)
Wondershare Video Free Player ciyaara files ugu video la lahayn codecs dibadda loo baahan yahay, oo ay ku jiraan codec avi daaqadaha 8. Waxa ay taageertaa 100 video qaabab iyo waxa uu leeyahay waxyaalo badan oo cajiib ah. Sidaa daraadeed, si fudud u qaadan snapshots, shaandheyn videos in la saxo hanuuninta, muuqa bedel 4: 3 16: 9, deinterlacing aad video, qabsato xawaaraha ciyaaraha, iyo in ka badan.
Si aad u ciyaaraan files AVI aad, si fudud u jiidi oo iyaga hoos u furmo suuqa barnaamijka, ama guji "Add files" in la dhiso playlist ah loo maqli haboon.
Xalka 2: Play AVI on Windows 8 K-Lite codec Pack rakibay
K-Lite codec Pack waa ururinta codecs iyo qalabka la xiriira, oo loogu talagalay sidii xal user-friendly u ciyaaro files movie oo dhan ah. Iyadoo codec K-Lite ka Pack waa in aad awood u ciyaaro 99% dhammaan filimada in aad kala soo bixi internet ka noqon. Marka la barbar dhigo baakad kale codec, waxa uu leeyahay faa'iidooyinka hoos ku qoran:
Waxaa had iyo jeer dib-u-taariikhda la qoraalkii ugu dambeeyey ee codecs ah.
Waa arrin aad u user-friendly iyo rakibo si buuxda u customizable, taasoo la micno ah in aad ku rakiban kartaa oo kaliya kuwa ka kooban in aad dhabtii doonaysid.
Waxaa la soo tijaabiyey si aad u wanaagsan, sidaa darteed baakada kuma jiraan codecs khilaafsan.
Waa xirmo aad u dhameystiran, oo ay ku jiraan wax kasta oo aad u baahan tahay inuu ciyaaro filimada aad.
Xalka 3: ciyaaryahan AVI Xoog u Windows 8: VLC
VLC ciyaaryahan warbaahinta ayaa ah ciyaaryahan warbaahinta ugu caansan diyaar u ah dadka oo dhan! Waa wax iska fudud, si degdeg ah oo awood leh media player. Sidaa daraadeed, ma waxaad noqon doontaa walwalsan qaabka.
A aadka loo qaadi karo, customizable ciyaaryahan warbaahinta xorta ah.
Cross-madal: Windows XP / Vista / 7/8, Mac OS X, Linux, macruufka, iwm
Taageerada tan oo ah qaabab: AVI, MOV, FLV, 3GP, Mpg, AVCHD, iyo in ka badan. Movies Torrent iyo hoorto videos internet-ka ayaa sidoo kale ka mid ahaa.
Qaab-dhismeedka Packet ku salaysan: sabab u ah habkaani gaar ah, waa awoodaa inay ciyaarto burburay, aan dhamaystirnayn, ama diiqid video files. Tani waxay si gaar ah faa'iido markii aad rabto in aad ka ciyaari video ah oo wali ka duuban.
Talooyin: Si aad u hesho wax badan oo ka mid files AVI aad, aad u bedeli karaan AVI in wmv qaabab loo jecel yahay oo lacag la'aan ah ama cid kale oo la isticmaalayo Wondershare Free Video Converter. Ka dib qaab beddelidda, waxaad u ciyaari karaa qalab kale oo badan oo la qaadi karo oo leh xad lahayn. Download free video Converter halkan: